मधेसको संकुचित अर्थ प्रदेश नम्बर दुई हो । मेचीदेखि महाकालीसम्मको दक्षिण नेपालको भूभाग विस्तृत अर्थमा मधेस हो । यो पनि एक किसिमले संकुचित अर्थमा नै हो किनभने यस प्रकारको भूगोल अन्यत्र पनि छ तर हाम्रो सन्दर्भ चाहिँ नेपालसित भएकोले यहाँ मधेस भन्नाले नेपालको मधेस नै बुझ्नु पर्दछ ।
मधेस साँस्कृतिक रुपले निक्कै सम्पन्न छ । मधेसका बसोबास गर्ने पहाडी समुदायका बाहुन, नेवार, तामाङ लगायतका जाति तथा समुदायको संस्कृति पनि मधेसको संस्कृतिको महत्वपूर्ण पाटो बन्न पुगेको छ । यी आगन्तुक संस्कृतिको प्रभाव मधेसी संस्कृतिमाथि परेको छ । यसले समाजमा निकै सकारात्मक सन्देश पनि दिएको छ । समाजलाई अगाडि बढाउन, समाजको सांस्कृतिक पक्षलाई सबल र स्वच्छ बनाउन मात्र नभई सांस्कृतिक सम्मिलनको दृष्टिले पनि अत्यन्त सकारात्मक भूमिका देखिएको छ । यसले गर्दा सबै संस्कृतिको विकास र विस्तार मधेसमा भइरहेको छ । हुनु पनि पर्छ । यति मात्र नभई केही विदेशी संस्कृतिको प्रभाव पनि पर्न थालेको छ । सामाजि संजाल तथा टेलिभिजन र चलचित्रको माध्यमले पनि संस्कृतिमाथि प्रभाव परिरहेको छ । परेको पनि छ । ग्रहणयोग्य सबै संस्कृतिालाई मधेसले स्वागत गरेको छ ।
मधेसमा बाह्रै महिनाका आफ्नै विशिष्ट संस्कृति छन् । आफ्नो विशेष सांस्कृतिक पहिचान भएको महिनाको रुपमा पनि समाजमा सम्मान छ । वैशाख स्नान, कात्तिक स्नान र माघ स्नानले यी महिनाहरुको पवित्रता बयान गर्दछ । अन्य महिनाहरुमा ठूला चाडपर्वहरु रहेका हुन्छन् । मुस्लिम समुदायको पर्वहरुले त झन् मधेसको संस्कृतिको फरक अनुभूति दिने गर्दछन् । संस्कृतिको क्षेत्रमा मधेस यति सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि अन्य क्षेत्रमा भने निक्कै पछाडि परेको देखिएको छ । राजनीतिक चेतना, भाषा साहित्यको विकास, शिक्षा तथा साक्षरता लगायतको क्षेत्रमा यो भूगोल अत्यन्तै पछाडि परेको छ । यसले गर्दा यहाँको समग्र आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुन पुगेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर के देखिन्छ भने मधेस विस्तारै गरिब बन्दै छ ।
मधेसको जमिन समथर छ, उब्जाउ छ । यसलाई अझै पनि अन्न भण्डार र देशको भकारी भन्ने गरिएको छ तर कतिपय जिल्लामा उब्जेको अन्नले धान्ने अवस्था छैन । अन्य जिल्ला वा विदेशबाट चामल, पिठो तथा तरकारी र दाल ल्याइन्छन् । सरेहको कुनै पनि खेत बाँझो नरहँदा पनि यस प्रकारको अवस्था किन आयो त ? पहिलेभन्दा उब्जनी बढेकै हो तर किन परनिर्भरता बढ्यो ? यसका दुई आयाम छन् – पहिलो जनसंख्या वृद्धि र दोस्रो अत्यन्त महंगो खेती । जनसंख्या वृद्धिका अनेक कारण छन् । जो जहाँबाट जसरी आए पनि मधेसले स्वागत गरेको छ । उत्तरबाट आए पनि ठिक र दक्षिणतिरबाट आए पनि ठिक । साथै यहाँका दलित, मुस्लिम र निरक्षर परिवारभित्र उच्च जन्मदर रहेको आफ्नो यथार्थ छँदैछ । यी तिन कारणले जनसंख्यामा तीव्र गतिले विस्तार भइरहेको छ । जनसंख्या विस्तारले मलिलो र अत्यन्त धेरै उब्जाउ खेतीयोग्य जमिनमा बाली उम्रनुको साटो घरहरु ठडिँदै छन् । जनसंख्या बढेजस्तै जमिन बढ्ने होइन । घडेरीमा जमिन जाँदै गर्दा उब्जाउ जमिन निरन्तर घट्दै गइरहेको र खाने मुख निरन्तर बढ्दै गइरहेकोले सन्तुलन मिल्न सकेको छैन । यसले गरिबी बढाएको छ वा सम्पन्न हुनबाट रोकेको छ, किनभने अन्नको आयात यसले गर्दा बढेको छ ।
महँगो खेती प्रणाली हाम्रो अभिशाप बनेको छ । महँगो दुई अर्थमा भन्न खोजिएको छ । पहिलो त किसानले किन्ने मल, बीउ, कीटनाशक औषधि समयमा नपाइनु, कमसल पाइनु र राम्रो जातको पाइयो भने पनि अत्यन्त महँगोमा पाइनु । हाम्रा किसानहरु सामान्य साक्षरसमेत छैनन् । म्याद गुज्रेका र अत्यधिक कडा किसिमका औषधि प्रयोगले आफ्नै स्वास्थ्यमाथि गम्भीर आघात गरिरहेको पत्तो पाउन सकेका छैनन् । हालै एकजना मेयरले के जानकारी दिए भने अहिले अब तोरी उखेल्नेवेलामा सरकारले आधुनिक बीउ पठाएको छ, यसलाई के भन्ने ? र यसलाई के गर्ने ? वास्तवमा अहिले पठाएको बीउ भान्छाको लागि काम लाग्ने भन्दा खेतको लागि काम लाग्नै पक्कै छैन । यसले के देखाउँछ भने हाम्रो सरकारी संयन्त्रले समयमा काम नगरेर पनि कृषिलाई हानी भइरहेको छ । कमसल बीउ, कमसल मल र कमसल रासायनिक औषधिले कृषिलाई मात्र होइन किसानको स्वास्थ्य र किसानको खेतलाई पनि धराशायी बनाउँदैछन् । किसानलाई यस मानेमा यदि शिक्षित बनाउन सकियो भने पनि धेरै राहत हुने थियो । हाम्रा किसानहरुलाई प्रांगारिक मल उपलब्ध गराउन सके एकातिर खेतको माटो जोगिन्थ्यो भने अर्कोतिर किसानको स्वास्थ्यमा सकारात्मक असर पथ्र्यो । रासायनिक मल र कीटनाशक विषादिको असर कतिसम्म परेको छ भने गाउँको हावामा बस्ने मानिसलाई पनि गम्भीर रोगहरु लाग्न थालेको छ । हामीले स्वास्थ्यको लागि भनेर खाने कुखुराको मासुदेखि हरियो सागसम्म सबै जहर भइसकेका छन् । यसर्थ रासायनिक मल र कीटनाशक रसायनको विकल्प नखोजेसम्म किसानलाई खेती महँगो साबित भइरहने छ ।
मधेसको गरिबीलाई परोक्षरुपमा दीर्घकालीन प्रभाव पारेको भने वैदेशिक रोजगारीले पनि हो कि ? मधेसको सबैभन्दा बढी युवा विदेशमा रहेको जिल्ला धनुषा हो । धनुषाको धेरै गाउँ अहिले खालीको स्थितिमा यसकारण छन् कि त्यहाँ युवा छैनन् र खेतीपाती गर्ने मानिसको अभाव छ । कि त विदेश गएका छन् वा कि त अन्यत्र रोजगारीको क्रममा लाहुर बनेका छन् । यो अवस्थाले गाउँमा पैसा नआएको होइन तर पैसा आउँदैमा खाना तथा उपचारमा खर्च भइरहेको छ । विदेशबाट आएको पैसा अत्यन्त जरुरीका सामानहरु किन्दा अधिकांश पैसा फेरि विदेशमै गइरहेको छ । गाउँघरमा रोटी पकाउनु भन्दा पहिले पिठो जेमा चालिन्छ, त्यो चाल्नेको हविगत हुन थालेको छ गाउँको । चाल्नोमा निख्खर बालुवा हाल्दा सबै तलै खसेजस्तो हाम्रो अर्थतन्त्रमा आएको रेमिटान्सको मुख्य अंश फेरि बाहिरिँदो पक्षलाई हामीले विचार गर्न सकेका छैनौँ । हामी केवल चाल्ने समाउने हात बनिरहेका छौँ । विदेशको आयले घर त ठडिएको छ तर वास्तवमा यसले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सहयोग गरेको छैन वा केही मात्रामा भए पनि जति आवश्यक हुनु पथ्र्यो, त्यसको अनुपातमा निकै कम छ । अरुहरु जति गतिमा अगाडि बढेका छन्, तिनको अगाडि हाम्रो गति अत्यन्त सुस्त छ ।
अझ यहाँको पिछडिएको वर्ग र दलित समुदाय त सबैतिरबाट ठगिएका छन् । ठगिएको थाहा नपाउने वर्ग हामीले हाम्रो उद्योग र व्यवसाय किन फस्टाउन सकेन ? हाम्रो समाजको विकासको लागि आएको रकमको उपयोग किन हुन सकेन ? देशको विकासमा हाम्रो मुख्य हिस्सा हुने गरेको इतिहास रहेकोमा किन अहिले हामी पछाडि पर्दैछौँ भन्नेतिर पनि सोच्न सक्ने अब रहेनौँ । खाली अरुलाई दोष दिने, गाली गर्ने वा राज्यले हाम्रो लागि केही गरिदिएन भनेर सराप्ने मात्र बन्दैछौँ विस्तारै । विदेशमा गएर जस्तोसुकै काम पनि गर्ने तर हामी आफ्नो गाउँघरमा पनि त्यसभन्दा राम्रो कामलाई पनि वास्ता नगर्ने र कोही गर्न खोजिरहेका छन् भने पनि हामीले उल्टै हेप्ने काम गरिरहेका छौँ । प्रोत्साहनको हामीमा कमी छ, उद्यमशीलताको कमी छ र हामी अरुलाई सम्मान पनि गर्न सकेनौँ । केही टाठाबाठाहरुले भने आफ्नो हातमा सम्पूर्ण शक्ति आएको मन पराउँछन् र हामीलाई एकआपसमा लडाउन चाहन्छन् । र हामी लड्नबाट पछाडि हट्दैनौँ । यसैको परिणाम के देखिन्छ भने चोरी, डकैती, अपराध लगायत अन्य नकारात्मक कुरामा हाम्रो तथ्यांक निकै माथि छ र मानवीय विकासको मामिला अर्थात सकारात्मक कुरामा हामी निकै पछाडि छौँ । सबैको सम्बन्ध गरिबीसित छ ।